खेल कोटिहरु पोकर कैसीनो खेलहरु
खेल श्रेणी: पोकर कैसीनो खेल
नि: शुल्क पोकर कैसीनो खेलहरु
के हो 'लूज Deuces'?
शब्द ढीला डेयस एक एकल प्लेयर मा एक भिन्नता को संदर्भित गर्दछ, पांच कार्ड ड्रा भिडियो पोकर खेल। खेलको उद्देश्य जंगली कार्डहरूको रूपमा डाइजको फाइदा उठाउन कार्डको सुरुवात हातबाट जित्नको लागि उत्तम विजेता हात सम्भव छ।2को साथ चार deuces, पांच-एक-प्रकार र जंगली शाही को लागि विशेष पेआउट ट्रिगर गरिन्छ। सामान्यतया प्राय: प्रायः अनलाइन खेल्नु, ढीला ड्यूज एक तेज पोकर पोकर गेम हो जहाँ एकाधिक हातहरु एकै समयमा खेल्न सकिन्छ र दोहोरो वा बोनस राउन्डले चाँडै प्यान्ट प्यान बढाउन सक्छ।
'ढीला ड्यूज' बयान गरिएको छ
ढीलो ड्यूजको वस्तु भनेको सर्वोत्तम सम्भव पोकर हात निर्माण गर्नु हो, जो मूल 5-कार्डको हातबाट काम गरेर डीलर द्वारा निस्किएको छ। खेलाडीहरूले खेलको हातहरू प्रत्येक गोलमा प्ले गर्न चाहने छनौट गरेर चयन गर्दछ, चिप्स मार्फत उनीहरूको सुरूवात क्रेडिट थप्दै। कार्डहरू निलम्बित छन् र खेलाडीले निर्णय गर्ने कुन हातले राख्नेछ र अर्को सम्झौतामा राम्रो कार्डहरूको आशामा खारेज गर्दछ। यस चक्रमा एक चक्र पूर्ण खेलको खेल हुन्छ।
पोकरको सबै भन्दा फरक संस्करणहरू जस्तै, एक खेलाडीले निम्नले निम्न बनाउँदा जीत राख्छ: एक शाही फ्लश, चार डिइज, ट्वोओसँग जंगली शाही, पाँच-एक-प्रकार, चार-एक-दया, तीन-एक -kind, सीधा फ्लश, पूरा घर, सिधा वा फ्लश। सिधा पोकरमा मुख्य फरक फरक फरक फरक छ जुन डेन कार्डहरूको प्रयोगमा छ (जसमा कार्डहरू दुईको मानसँग हुन्छन् - एक मानक डेकमा सबै भन्दा कम)। तिनीहरू ढीका ड्यूज पोकरमा जंगलमा कार्ड बन्छन्। यसको अर्थ तिनीहरू डेकमा कुनै पनि अन्य कार्डको लागि प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, नयाँ विजेता हातहरू जस्तै twos सँग जंगली शाही र कुनै पनि पाँच-एक-प्रकारको सिर्जना गर्न सकिन्छ। चाल लामो समयसम्म ड्युस कार्डहरू राख्नको लागी रहन्छ, विजेता हात सिर्जना गर्न डेकमा कुनै पनि कार्डको ठाँउमा उनीहरूलाई खारेज नगर्न कहिल्यै रोक्दैन। एक खेलाडीलाई सधैं दुई कार्डहरूको कार्ड खारेज गर्नुपर्छ किनकि जोडीले हात जित्न सक्दैन, तर एक प्रकारको तीन वा चार गर्न सक्छन्।
???? 30 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा छैन
???? 60 वफादार नि: शुल्क प्रायः!
???? $ 285 फ्री कैसीनो टिकट
💵 € 4745 ना जमा कैसीनो बोनस
💵 $ 1475 जम्मा रकम बोनस कोड छैन
💵 यूरो 4005 जम्मा छैन
💵 475% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 यूरो 4245 कुनै प्रस्थान बोनस
💵 यूरो 400 मुफ्त CHIP
💵 € 940 ना जमा कैसीनो बोनस
💵 यूरो 3935 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो
💵 65% क्यासिनो म्याच बोनस
💵 60% कुनै नियम बोनस!
💵 980% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 $ 333 क्यासिनो टूर्नामेंट
💵 € 595 फ्री कैसीनो चिप
💵 905% साइन अप कैसीनो बोनस
💵 यूरो 2370 कुनै डुप्लिकेट बोनस कोड
💵 385% कैसीनोमा मिलान
💵 $ 555 जम्मा छैन
💵 110 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा छैन
💵 € 111 मुक्त चिप कैसीनो
💵 € 460 मुक्त कैसीनो चिप
💵 € 895 फ्री कैसीनो टूर्नामेंट
💵 195 नि: शुल्क छुट्याइएको छैन
💵 715% जम्मा मिलान बोनस
💵 € 2335 ना जमा कैसीनो बोनस
💵 650% कैसीनोमा मिलान
💵 300 नि: शुल्क स्पिनहरू अहिले
💵 पाउन्ड 270 कैसीनो टूर्नामेंट freeroll
💵 यूरो 630 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 £ 3385 जम्मा छैन
💵 $ 575 नि: शुल्क क्यासिनो चिप
💵 यूरो 3125 कुनै जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 € 2555 NO DEPOSIT CASINO बोनस
💵 925% बोनस
💵 पाउन्ड 600 मुक्त चिप क्यासिनो
💵 £ 735 NO DEPOSIT
💵 £ 940 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 $ 444 डेली फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 345% क्यासिनोमा मिलान
💵 40 नि: शुल्क स्पिनहरू अहिले
💵 125% कुनै नियम बोनस!
💵 पाउन्ड 1040 जम्मा जम्मा कैसीनो बोनस छैन
💵 EUR 3110 जम्मा छैन
💵 € 540 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट
💵 € 3555 जम्मा छैन
💵 385% म्याच बोनस क्यासिनो
💵 $ 390 फ्री कैसीनो टिकट
💵 305% साइन अप क्यासिनो बोनस
💵 85% कुनै नियम बोनस!
💵 $ 3585 जम्मा बोनस कैसीनो छैन
💵 € 3020 जम्मा बोनस कोड
💵 $ 88 कुनै जम्मा रकम बोनस कोड
पागल पागल। Mad Mad Monkey तपाईंको नि: शुल्क खेल सुविधा संग एक5रील स्लॉट खेल को बढावा दिन को लागि ...
Mayan Moons स्लॉट पुरातन Mayan सभ्यता को लागि समर्पित छ। तपाईंले भरी एक रोमांचक मेसिनको आनन्द लिनुहुनेछ ...
Betsoft बाट स्लॉटफ्रेटर अनलाइन स्लॉट खेल लोकप्रिय गॉडफेर मूवी थीम संग डिज़ाइन गरिएको छ र यो यकीन छ कि ...
यदि तपाईं एक पोकर प्लेयर को थोडा को रूप मा कल्पना गर्छन तर तपाईं चिंतित हुनुहुन्छ कि तपाईंको bluffs पढ्न सक्षम हुन सक्छ, यसको लागि केवल एक चीज हो: 10 रेखा जैक वा राम्रो भिडियो पोकर।
10 रेखा जैक वा राम्रो खेल जानकारी
बिस्तारै पाउन्ड 2.50 बाट शर्त
प्रगतिशील खरगोशको लागि खेल्नुहोस्
प्रति दौर 10 समय सम्म अप गर्नुहोस्
सफ्टवेयर प्रदायक: Playtech
कसरी 10 रेखा जैक वा राम्रो प्ले गर्नुहोस्
यो पार्टी सुरू गर्न, तपाईंले गर्नु आवश्यक पर्ने पहिलो कुराले तपाईंको शर्त सेट गर्यो। +/- बटनहरू प्रयोग गरेर, तपाइँ डायल अपलाई £ पाउण्डमा बदल्न सक्नुहुन्छ0.25 देखि £ 1.25 तपाईंको bankroll को आकार को आधार मा। यद्यपि, यो याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यो 10 रेखा जैक हो वा राम्रो भिडियो भिडियो पोकरको तपाइँको औसत खेल होइन।
यस खेलमा, तपाईंले चयन गर्नुभएको कुनै पनि शर्त रकम 10 द्वारा गुणा गरिनेछ। त्यसैले, यदि तपाईं तल्लो तहमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँ प्रति सौदा पाउनुहुनेछ 2.50 प्रति सम्झौता। स्पेक्ट्रम को माथिल्लो भाग मा, एक सिंगल दौर £ 12.50 को खर्च हुनेछ। एकपटक तपाईंले आफ्नो स्तर उठाएपछि, तपाइँले आफ्नो कुल दाईलाई 1, 2, 3,4वा5द्वारा गुणा गर्न सक्नुहुनेछ। "शर्त एक" बटन ट्याप गरेर, तपाईं आफ्नो समग्र वेगर बढाउन सक्नुहुन्छ, यसैले तपाइँले जित्न सक्नुहुनेछ रकम बढाउन सक्नुहुन्छ।
अहिले, भिडियो पोकरको एक एकल हातमा खर्च गर्न धेरै जस्तो आवाज हुन सक्छ, यो सम्झनाको लागि कि 10 रेखा जैक वा राम्रोले तपाईंलाई 10 को मौका जित्ने मौका दिन्छ। त्यसो त, केवल पाँच कार्डहरू प्राप्त गर्न र सट्टामा राख्ने प्रयास गर्न / स्थानान्तरण गर्ने क्रममा, तपाईले 50 कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ!
प्रगतिशील पोकर जैकपोटहरूको लागि प्ले गर्नुहोस्
भिडियो पोकरको परम्परागत गेमहरूको विपरीत, 10 रेखा जैक वा पेडी पावर क्यासिनोमा अझ राम्रो मोटो हुन्छ। साथै मानक पोकर ह्यान्ड्सको लागि निश्चित पेआउट (यानी जैक्स वा राम्रो जोडी, एक सीधा, फ्लश आदि), तपाईंसँग प्रगतिशील खजानाको लागि पनि खेल गर्ने मौका छ।
जबसम्म तपाईं आफ्नो शर्तलाई पाँच द्वारा गुणा गर्नुहुन्छ, तपाईं एक शाही फ्लश निलम्बन गरिरहनु भएको छ भने हजारौं पाउन्ड जित्ने एक शटमा हुन सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, के 10 रेखा जैक को बारे मा अझ राम्रो के छ या बेहतर यो तपाईं धेरै लाइनहरु मा जीत सकते हो। त्यसोभए, यदि प्रगतिशील खरगोश जित्नको लागि तपाइँ पहिलो रेखामा एक शाही फ्लश हिट गर्नुहुन्छ भने तपाईले अतिरिक्त विजेता संयोजनहरू सिर्जना गर्नुभएका प्रत्येक रेखाहरूमा 4,000 जित्नु हुनेछ।
कुल मिलाएर, यदि तपाईं आफ्नो कौशल परीक्षण गर्ने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ तर उत्तम पोकर अनुहार छैन भने, 10 रेखा जैक वा राम्रो तपाईंको लागि खेल हो।
सुझाव गरिएका खेलहरू: यदि 10 रेखा जैक वा राम्रोले तपाईंको पल्स रेसिङ पाउँदैन भने किन केहि हातहरू खेल्न सक्दैनन्? जोकर पोकर?
Jingle घंटी, जिंग घंटी, जंगल सबै तरिका! मेररी क्रिसमस स्लट मिसिनको साथ विकसित यो सुन्दर क्रिसमस गीत गाई गर्नुहोस् ...
ताजा देश वायुमा साँस्कृतिक र फलफूल ™ ™ संग एक अमीर फसलको आनन्द लिनुहोस्! गाई, भेडा, सुँगुर र चिकन ...
नाइट फल्स पछि सूर्य सेट गर्दा के हुन्छ साँच्चै के हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। Betsoft ले यो 3D भिडियो स्लट लिन्छ ...
जैक वा राम्रो 52- हात भिडियो पोकर हाइलाइटहरू
त्यहाँ ज्याक्स वा बेटरको यस खेलमा 52 हातहरू छन्। डेकमा प्रत्येक कार्डको लागि त्यो हात हो! तपाईं ज्याक वा बेटर खेल्दै हुनुहुन्छ र भुक्तानी ज्याक वा बेटर, एक्सएनयूएमएक्स जोडी, एक प्रकारको 2, सीधा, फ्लश, पूर्ण घर, चार प्रकारको, सीधा फ्लश र रोयल फ्लशको जोडीहरूको लागि हो।
52 कार्डहरूको डेक प्रयोग गरिएको छ र डेक प्रत्येक हातले फेरबदल गरियो। तपाइँ प्रति हात 1 बाट5सिक्का प्रति शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँसँग छनौट गर्न5सिक्का सम्प्रदाय छ: 1 ¢,5¢, 25 ¢, 50 ¢, र $ 1।
सबै भन्दा राम्रो भुक्तानी अधिकतम शर्तमा खेल्दै छ। एउटा सिक्कामा रोयल फ्लसले 250 सिक्का भुक्तान गर्दछ तर पाँच सिक्कामा रोयल फ्लसले 4000 सिक्का भुक्तान गर्दछ।
पचास हात ह्याड ग्रिड ज्याक वा बेटर पोकरको यस संस्करणमा प्रयोग गरिन्छ। तपाइँ5कार्डहरू समाते।
केवल तलको हातले सुरूवात कार्डहरू प्रदर्शन गर्दछ। अधिकतम भुक्तान संयोजन बनाउनको लागि धेरै कार्डहरू होल्ड गर्नुहोस् वा रद्द गर्नुहोस्। प्रत्येक हातले छुट्टै 52 कार्ड डेक प्रयोग गर्दछ र प्रत्येक हातले तल रेखा हात जस्तो समान कार्ड राख्छ। बाँकी कार्डहरू उनीहरूको छुट्टै डेकबाट प्रत्येक हातमा डिल गर्न ड्र गर्नुहोस्।
कुनै विजेता संयोजन बिना हात छायादार छ र विजयी संयोजन बायाँ को भुक्तानी तालिका मा प्रदर्शित हुनेछ। सबै भन्दा बढि संयोजनको भुक्तान गरिएको छ।
यो प्यारा र आकर्षक नयाँ खेलमा स्वागत छ जुन हामी यहाँ भिडियोलिट्स.com प्रस्तावमा छौं; हामी यस उत्कृष्ट भिडियोमा ...
Play'n Go एउटा अझै अर्को ठूलो स्लट मिसिन प्रस्तुत गर्दछ जसले तपाईंलाई लक्जरी र सम्पत्तिको संसार ल्याउनेछ। मनपर्यो ...
यो अर्को अड्कल बच्चा हो Microgaming; विश्वमा शीर्ष अनलाइन क्यासिनो सफ्टवेयर निर्माता। एक शानदार 53 कार्ड खेल - 52 कार्ड डेक + आनन्द-मनुष्य जोकर। कुनै पनि विजेता संयोजन को पूरा गर्न को लागी जोकर एक जंगली कार्ड को रूप मा पेश गरेको छ। सफ्टवेयर स्वचालित रूपमा जोरले आवश्यक भ्रामकमा तपाईंलाई सर्वोच्च सम्झौता दिईएको छ। खेललाई कार्डहरू प्रत्येक ढाँचामा पुन: फेरबदल गर्न आवश्यक छ, तपाईंलाई हरेक समयमा अनियमित सम्झौता दिन्छ।
दावी + + र - चिन्हहरूमा क्लिकहरूसँग वृद्धि वा घटाउन सकिन्छ। 'बेट वन' र आधार आधार को आकार को एक इकाई क्लिक गरी राखिएको छ, जस्तै कि 'Bet Max' मा क्लिक गर्नुपर्नेछ अधिकतम विजार्ड राख्नुहोस्। बच्चाको खेल खेल्न साँच्चै सजिलो छ जोकर पोकर, केवल 'डील' बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र चीजहरू रोलिंग हेर्नुहोस्। खेलाडीले पाँच कार्ड प्राप्त गर्यो र कुन कुन / क्लिक गर्न चाहानुहुन्छ क्लिक गर्न आवश्यक छ।
एक 'ओटो प्ले' उपलब्ध खेलाडीहरूका लागि उपलब्ध छ जुन विशेषज्ञ मोडमा सामान्य मोडबाट हस्तान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ। निस्सन्देह यो स्वचालित रूपमा गणित गणनाको परिस्थितिमा सम्भवतः निर्णयमा आधारित तपाइँको स्वचालित हातहरू खेल्छ। बस 'ड्रा' थिच्नुहोस् र तपाईंको लागि सबै नयाँ कार्डहरू हटाउनुहोस्।
यदि तपाइँ विजयी हातमा पुग्नुभयो भने खेलले तपाईँलाई जित्नको लागि विजयी बनाउन अनुमति दिन्छ। यो विकल्प 'Doubling' मा क्लिक गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, एक शानदार विशेषता जुन कुनै अन्य खेल प्रस्ताव छैन तर जोकर पोकर। यो सुविधाको यो तपाईंलाई तपाईंको फेस-डाउन कार्डहरू दलर कार्डहरूको विरुद्धमा बलियो बनाउन अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंको उच्च मूल्य हो भने तपाईं डबल पुरस्कार जित्नुहुन्छ। अब दोहोरो राख्नुहोस् वा एक दिन, कुनै पनि समयमा कल गर्नुहोस्। छनौट तपाईंको हो।
साइटले धेरै अनुकूलन अनुकूलनहरू जस्तै ध्वनि नियन्त्रण, गेमिङ गति, र सबै अनलाइन सहायकलाई माथि प्रदान गर्दछ जुन तपाइँले कुनै पनि क्षणमा सर्वोत्तम संभव गणित गणना पछि सबै भन्दा प्रतिज्ञा शर्तको संकेत गर्दछ।
तपाईंले जित्न सक्नुहुने उच्च खजाना 5000 सिक्काहरू (अधिकतम wagering को आधारमा) तर तपाईलाई यसको लागि 'प्राकृतिक रयल फ्लश' चाहिन्छ; एक रयल फ्लश बिना जंगलमा कार्ड बिना। न्यूनतम शर्तको रूपमा सानो हुन सक्छ 0.25 र अधिकतमले 100 पटक उच्च जान सक्छ जुन एक $ मा 25 $ हो।
अनलाइन जोकर पोकर को सबै भन्दा अनुकूलित विशेषताहरु यसको Autoplay र विशेषज्ञ मोड, डबलिंग विकल्प, वाइल्ड कार्ड प्रविष्टि र स्वतः पुनः शर्त हो। जोक पोकर प्रस्तावित केहि प्रमुख कैसीनोहरू प्लैटिनम प्ले, सबै स्लॉट,7सन्तान, वेगागा पाल्म्स क्यासिनो र रयल वेगास हुन्।
माइक्रोगिमिङ उत्पादन हुनु, यसले सबै सामान्य कुञ्जी विशेषताहरू पाउँछ जुन यी गेमहरू अनलाइन गेमिंग समुदायमा सबैलाई मनपर्ने बनाउँदछ। यसको केहि विशेषताहरु प्रयोगकर्ता-अनुकूल, स्पष्ट ग्राफिक्स, आँखामा सजिलो, सजिलो नेविगेशन समावेश गर्दछ। यसको सबै विकल्पहरू स्पष्ट छन् र नयाँ खेलाडीहरूको पहुँच भित्र। पेआउट तालिका एकदम महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाइँलाई एक बत्तीको बारेमा स्पष्ट विचार दिन सक्नुहुन्छ। यो बुझ्न र खेल्न सजिलो छ। मद्दत सँधै एकल क्लिकमा उपलब्ध छ। यो वास्तवमा 'डबलिङ' सुविधा हो युगल विजेता को लागि मजा! A कुनै पनि अनलाइन साहसीको लागि प्रयास गर्नु पर्छ।
हेइडीको बियर हाउस
केहि समय बित्यो
के तपाईं यस मजामा नील हुँदाहुँदै खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ, कुकिई, टोलीबाट 50-payline खेल ...
एक हात बजाउँदै जोकर पोकर रमाइलो छ र यो संस्करणले तपाईंलाई 10 पटक मजा प्रत्येक खेललाई दिन्छ! तपाईं 10 हातहरू खेल्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक हातले जोकर र जोकर सहित 53 कार्डको डेक प्रयोग गर्दछ जंगली हो।
पेआउट राजाहरूमा वा राम्रो छ, दुई जोडी, तीन प्रकारका, सिधा, फ्लश, पूर्ण घर, चार प्रकारका, सीधा फ्लश, जोकर रयल फ्लश, एक प्रकारको 5, र 4000 सिक्किमको उच्चतम भुक्तानीको साथ प्राकृतिक रयल फ्लश। को लागि प्राकृतिक रयल फ्लश को लागि।
सम्झौतामा तपाईंले5कार्डहरू उठाउनुहुन्छ (निर्णय हात भनिन्छ)। यो कार्ड ग्रिडको तल्लोमा प्रदर्शित हुनेछ। तपाईं यी5कार्डहरूबाट उच्चतम जित्ने हात बनाउन को लागी वा त्याग्नुहुन्छ।
निर्णय हात तपाईले यो खेलमा निपटने दसवटा हातहरू मध्ये एक हो। जोकर कुनै पनि कार्डको लागि उच्चतम विजेता संयोजन पूरा गर्न को लागी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। जब तपाईं ड्रामा क्लिक गर्नुहुन्छ,5कार्डहरूको नौ अतिरिक्त हातहरू पेश गरिनेछ।
तपाई बाँकी कार्डहरू प्रत्येक हातलाई अलग-अलग डेकबाट पूरा गर्न निस्कनु भएको छ। प्रत्येक हातमा उच्चतम संयोजन भुक्तानी गरिन्छ।
तपाईं 1 लाई5सिक्का प्रति शर्तमा शर्त गर्न सक्नुहुन्छ तर सर्वोत्तम भुक्तानी जब तपाईं सिक्का मूल्यवृद्धिको लागि अधिकतम शर्त खेल्दै हुनुहुन्छ एक प्राकृतिक सिक्का एक सिक्कामा 400 सिक्का (अन्य भिडियो पोकर खेलहरूमा 250 सिक्का भुक्तानीको तुलनामा) तर एक प्राकृतिक अधिकतम सिक्का (रोयल फ्लश) (5) ले धेरै अन्य संस्करणहरू जस्तै 4000 सिक्का दिन्छ।
जोकर पोकर3हात 20,000 सिक्किहरु को अधिकतम जीत संग एक रोमांचक भिडियो पोकर खेल हो। खेलाडीहरू एक समयमा तीन हात खेल्न मौका पाउँछन् र यसरी एक सत्र भित्र तीन समान वा पनि फरक पुरस्कारहरू जित्छन्।
जोकर पोकर3ले हातहरू बीचको शर्त स्वीकार गर्दछ 0.01 र 1; खेलाडीहरूले 1 बाट5सिक्किमहरूमा कुनै पनि ठाउँ लिन सक्छन्। निस्सन्देह, प्रत्येक सिक्काको संख्याले सम्भव विनाको कुल रकममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
मुख्य हातको अतिरिक्त, यो भिडियो पोकर संस्करण प्रति सत्र दुई हात प्ले गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो कार्ड प्याक निलम्बित भएपछि, पकडका लागि चयन गरिएको कार्ड दुई अतिरिक्त हातहरूमा थपिएका छन्। त्यसपछि प्लेयरले बाँकी कार्डहरू र सम्भावित विन्निङ प्रदर्शन गर्न ड्रप बटन हिट गर्दछ।
सिक्काको संख्यामा निर्भर गर्दछ, पेआउट 1 सिक्का र 20,000 सिक्किङ्हरूमा हुन सक्छ। खेलमा सबै भन्दा कम भुक्तानी संयन्त्रहरू राजाहरू वा राम्रो र2जोडी हुन् जसले 1 र5सिक्काहरू बीच भुक्तानी गर्छन्। तिनीहरू तीन प्रकारका, सिधा र चिसोले पछ्याउँदछ; तपाईंको अधिकतम वेतन5मा सुरू हुन्छ र 25 सम्म पुग्छ।
अर्को सूचीमा पूर्ण घर र चार प्रकारका एक पछाडि एक सीधा फ्लोश र रयल जोकरले पछ्याएको छ। यदि तपाइँ5सिक्काहरू चलाउनुहुन्छ भने, खेलाडीले 30 र 400 सिक्काहरू बीचको जीतको आशा गर्न सक्छन्। अन्तमा, पहिलो तीन हात जोकर पोकर3ह्यान्ड्स, रयल फ्लश र सेकको5ह्यान्ड्स। Royal; जबकि अन्तिम 20,000-सिक्का खजाना भुक्तानी गर्छ, अन्य दुई वेतन 750 र 4,000। जोकर यस खेलमा जंगली कार्ड हो।
जोकर पोकर3ह्यान्ड एक मनोरञ्जन खेल हो जुन उनको प्रयासहरुको लागि भिडियो पोकर प्रशंसकहरु को पुरस्कार दि्छ। जहाँसम्म ग्राफिक्स चिन्तित छन्, छनौट केहि खास छैन, तर 20,000 सिक्किहरुका उनको शीर्ष इनामले उनलाई निश्चित रूपमा रडारमा बनाउँछ।
पान्ड्यानिया स्लॉट अर्को अग्निजन गेमिंग को जनावर-थीम अनलाइन स्लॉट मध्ये एक हो। खेलाडीहरूले पाण्डेमा र आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर ...
जोकर पोकर 52 ह्यान्ड पारंपरिक भिडियो पोकर खेल को एक शानदार संस्करण हो, खेलाडी को जीत को लागि एक अतिरिक्त जोकर कार्ड र बोनस गेमबल दौर संग। बहुतायतका हातहरू र धेरै पेआउट कि सूटसँग, केही खेलहरू जोकर पोकरको रूपमा रोमाञ्चक वा इनामदायी हुन सक्थे। खेल 53 कार्डहरूसँग पारिएको छ, पारंपरिक 52 को विपरीत; अतिरिक्त कार्ड जंगली कार्ड हो र "जंगली" को रूप मा कार्य गर्दछ जुन कुनै अन्य कार्ड को बदलन को लागी उत्तम संभव हात प्राप्त गर्न को लागी।
जोकर पोकर 52 ह्यान्डको ड्रा पोकरमा, जोकरहरू जंगली छन् र विजयी हातहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पाँच-कार्ड हातको साथ सुरू गर्नुहोस् र कसलाई राख्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्। बायाँ त्याग्नुहोस् र ड्रा मा क्लिक गरी नयाँ एउटासँग बदल्नुहोस्। एक जोडा राजाहरू पेआउट जित्न आवश्यक न्यूनतम हात हो, र यदि तपाइँ जित्नुहुन्छ भने, तपाइँको सँगै डबल वा कुनै गोल गर्न विकल्प छ। एक कार्ड छान्नुहोस् जसले कार्ड छान्छ र तपाईंलाई देखाउँछ। केवल चार अनुहारबाट स्क्रिनमा कार्डहरू तल उच्च मूल्य कार्ड छान्नुहोस् र तपाईं आफ्नो winnings लाई दुबारा गर्न आफ्नो तरिका हुनेछ।
ह्यान्ड्सको आधारमा पेटीबलमा आधारित छ। कार्डहरू एकल स्ट्याकबाट निस्किएका छन्। कार्डहरू प्रत्येक हातसँग मिल्दछ। प्लेयरसँग पाँच कार्डहरू राख्नको लागि मौका छ।
हातहरू र राम्रो2जोडेहरू व्यवस्थित गरिएका छन्। केवल धोका गरौं पूर्ण प्रकारको घर4एक किसिमको मात्र सिपाही कुखुरा राइल रयल जोकर5सँग एक प्रकारको रयल फ्लशको अनुक्रमीय रॉयल जोकरहरू पनि जंगली छन् र अन्य जित्ने हातहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक विजेता हात हुन सक्छ र तिनीहरूको कुल थपिएको छ। यो पनि खेल को जीतने को अवसर पनि छ कि तपाईंको मुद्रा दोहोरो लाग््छ।
- जोकर पोकरले पनि स्वत: प्ले सुविधा समावेश गर्दछ जसले खेलाडीलाई 25 सँगै एक शर्तमा अनुमति दिन्छ। ओटोप्ले सुविधाको बेला, स्वत: होल्ड सुविधाले स्वचालित रूपमा सबै कार्डहरू रेकर्ड गर्न सक्रिय पार्दछ जुन तपाईंको कम्प्युटरलाई मूल्यवान मानिन्छ
जादू जेस्टर स्लॉट नोनोमेटिकबाट Greentube खेलहरूको एक लाइन हो। विकासकर्ताहरूले यो खेल दिन प्रयास गरेका छन् ...
बार7को
यदि तपाइँ स्लट मेशिन गेम हेर्दै हुनुहुन्छ जुन वास्तव मा क्लासिक फल मिसिनहरु को बारे मा सबै कुरा गर्छन, तब पल्ट7को ...
त्यहाँ भिडियो पोकरको धेरै भिन्न भिन्नताहरू छन्, तर सबैभन्दा लोकप्रियमा जैक वा राम्रो, ड्रा ड्रा पोकर पनि भनिन्छ। यो भिडियो पोकरको सबै भन्दा आधारभूत विविधताहरू हो जुन तपाइँले खेल्न सक्छ किनभने तपाईले ज्याक वा बेटरको साथ एउटा पैसा प्राप्त गर्न मात्र आवश्यक छ। जैक वा बेटर भिडियो उत्पादन गर्ने पहिलो पोकरको पहिलो संस्करण हो, किनकि यसको खेल नजिकको मूल ड्रा पोकर खेल जस्तो देखिन्छ।
धेरै अनलाइन भिडियो पोकर खेलहरूको रूपमा, ज्याकको एक हात वा खेलाडीको शर्तसँग सुरू हुन्छ। त्यसपछि उनले पाँचवटा कार्डहरू सम्बोधन गरे जुन उसले आफ्नो छनौटमा राम्रो हातको खोजीमा राख्न वा त्याग्न सक्दछ।
जैक वा राम्रो - हात बुझ्ने
उच्च: कुनै पनि कार्ड जो जैक वा उच्च छ। कम, अर्कोतर्फ, सबै कार्डहरूलाई जगेडा गर्दछ जुन जैकको भन्दा कम मूल्यमा छ। उच्च कार्डहरूको उदाहरणहरू एसी, राजा, रानी, ​​र ज्याकमा समावेश छन्, जबकि2मार्फत 10 बाट कम कार्डहरू चलाउँछन्।
रयल फ्लश: 10 सँग सुरु हुने र एक्सेसँग समाप्त मेल खाने सूटको पाँच अनुक्रमित कार्डहरूलाई बुझाउँछ। यो ज्याक वा बिटरमा उच्च भुक्तान गर्ने हात हो।
सीधा फ्लश: 10 सम्मको समान सूटको पाँच क्रमशः कार्डहरूको अनुमानित (जस्तै, 6, 7, 8, 9, 10)।
चार प्रकारको: एउटै नम्बरको चार कार्डहरू बुझाउँछ। उदाहरणको लागि, चार राजाहरू वा चार2हरू।
फुल हाउस: तीन हातमा एक जोडी र एक जोडा (जस्तै तीन 7s र दुई राजाहरु) संग एक हात को जोड।
चार रयल फ्लशको लागि: यो मात्र मतलब छ कि तपाइँले एक रयल फ्लश बनाउनका लागि चारवटा पाँच कार्डहरू राख्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईसँग 10, जैक, रानी र राजा छ भने, तपाइँलाई केवल एक अर्काको लागि आवश्यक छ कि रयल फ्लश पूरा गर्न।
फ्लश: एउटै सूटको पाँच कार्डहरू छन्।
तीन प्रकारको: एउटै हातमा एउटै नम्बरको तीन कार्डहरू छन्। उदाहरणका लागि, तीन6हरू वा तीन जैक।
सीधा: क्रमबद्ध क्रम मा पाँच कार्ड को संदर्भित गर्दछ तर जरूरी नहीं कि त्यहि सूट को।
एक सीधी सीधा फ्लश को लागि: बस मतलब छ कि तपाईं एक सीधी सीधा पूरा गर्न को लागी पांच को पांच कार्ड पकडें।
दुई जोडी: कार्डहरूको दुई जोडीहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक जोडीले एउटै नम्बर समावेश गर्दछ (उदाहरणार्थ दुई 4s र दुई अङ्कहरू)।
तीनलाई एक रयल फ्लशमा: तपाइँले तीनवटा आवश्यक कार्डहरू राख्नुभयो जो रयल फ्लश बनाउनका लागि आवश्यक छ।
एक फ्लशमा चार: एउटै सूटको चारवटा कार्डहरू छन्।
एक सीधा सीधा: अनुक्रमित क्रम मा चार कार्ड समावेश गर्दछ, तर जरूरी नहीं एक नै सूट को।
एक सीधा सीधा फ्लश गर्न: तपाइँसँग अनुक्रमित क्रममा तीन कार्डहरू छन् र एउटै सूटको लागि एक सीधा फ्लश बनाउन।
दुईलाई एक रोयल फ्लश: रयल फ्लश सुरक्षित गर्न दुईवटा कार्ड।
भिडियो पोकर रैंक्स संसारमा सबैभन्दा सामान्य प्लेसूची क्यासिनो खेलहरू बीचमा विभिन्न कारकहरू यसको लोकप्रियतामा योगदान पुर्याउँछन्। खेलले कम गृह किनारमा समेट्छ र जबसम्म खेलाडीहरू राम्रो रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्दछ र इष्टतम निर्णयहरू गर्न सक्छन्। दुवै अनलाइन र अफलाइन क्यासिनोहरूले अब यस खेलको प्रशंसकहरूको बढ्दो भूखान को लागी एक प्रभावकारी संख्याको भिडियो पोकर विविधताहरू प्रस्तुत गरेका छन।
खेलको विस्तारित भिडियो पोकर परिवारको सबैभन्दा प्रसिद्ध सदस्य हो डबल बोनस पोकर। धेरै अन्य भिडियो पोकर संस्करणहरू जस्तै, यो एक, पनि, सामान्य रूपमा खेल्ने व्युत्पन्न हो जैक वा राम्रो। खेलले अर्को ज्याक वा राम्रो डेरिभेटिभ, बोनस पोकरसँग धेरै कम समानताहरू पनि साझेदारी गर्छ, मात्र यो उच्च भिन्नतासँग आउँछ।
डबल बोनस पोकरसँग रुचिको मुख्य बिन्दुहरू मध्ये एक हो कि यो इस संग एक चार को एक बनाउन को लागि दुई क्रेडिट को रूप मा धेरै क्रेडिट प्रदान गर्दछ, जसमा खेल पनि यसको नाम हो। धेरै खेलाडीहरू बोनस पोकरबाट दुईपटक बोनस पोकरमा संक्रमण गर्न छिटो हुन्छन्, तर दुर्भाग्यवश, केहीले यस खेलको एक प्रमुख विशेषतालाई विचार गर्न रोक्न - दुई बोनसका लागि चार अंकका लागि दोहोरो भुक्तानीको मूल्य दोहोर्याइएको छ। , जो ठीक छ जो भिन्नता बढ्छ।
Ra deluxe6को किताब
रा डिलक्स6स्लॉटको पुस्तक मिस्रको विषयवस्तुसँग यसको अगाडिको रूपमा आउँछ। को विषय ...
त्यहाँ शहरमा शेरिफ गर्न नयाँ ट्याब हो र बदला लिनको लागि। साँचो शेरिफ 3D स्लॉट अन्य हो ...
डबल डबल बोनस (DDB) संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो पोकर खेल हो। यो ठूलो हातले आउँछ - र सूखी मंत्र। जाहिराव यो धेरै खेलाडीहरूको लागि "स्वर्ग वा नरक" को सही मिश्रण हो।
केडीईबीबीले तपाईंलाई 4-of-a-type को लागी कसरी प्राप्त गर्दछ।
डबल डबल बोनस सिम्युलेटर
माथिको तस्वीरले खेलको "9 / 5" संस्करणको वर्णन गर्दछ (तपाइँले पूर्ण घर र 9-for-1 लाई फ्लशको लागि 5-for-1 भुक्तानी गर्नुभएको छ) जहाँ राम्रो खेल 97.87% औसत मा राम्रो हुन्छ। त्यहाँ राम्रो वेतन कार्यक्रमहरू र खराब छन्। आज हामीले कुरा गर्ने खेलहरू सबै साधारण वेतन कार्यक्रमहरूको लागि सही हुनेछ।
कति मात्रामा त्रुटिहरू गणनाको हिसाबले गणना गरिन्छ कि तपाईं डलरको लागि खेल्दै, एक पटकमा पाँच सिक्का दाँत गर्दै हुनुहुन्छ।
K ♦ क्यू ♦ जे ♦ 10 ♦9♦
के तपाईं एक सहकर्मी हुनुहुन्छ वा तपाईं जुआरा हुनुहुन्छ? क्यूबर्डहरूले सबै पाँच कार्डहरू राख्छन्, जब जुआहरूले नौलाई टाउकोमा, प्रार्थना भन्छ, र शाही फ्लशको लागि जान्छन्।
यस अवस्थामा, एक coward $ 250 को लायक छ र जुआ हुनु $ 92.34 को लायक छ। जब तपाईं पहिले देखि नै सिधा फ्लश तपाईंसँग निलम्बित गर्न यो ग्याम्बल गर्न एक ठूलो गल्ती हुनेछ। त्यो हातको तुलना गर्नुहोस् K ♦ Q ♦ J ♦ 10 ♦ 8 ♦ (जहाँ तपाइँसँग $ 25 को बराबर फ्लश छ) वा K ♦ क्यू ♦ जे ♦ 10 ♦9♠ (तपाईसँग सीधा मूल्य $ 20 छ)। यी दुइटा घटनाहरूमा, जुआ बन्नु भन्दा राम्रो खेल हो।
धेरै खेलाडीले केक्सएक्सएमक्स ($ 7.24 को लायक) को सट्टा राजाहरु ($ 77 को लायक) राख्छ। त्यो ठूलो त्रुटि हो र यो प्राय: हुन्छ।
जब तपाईं राजालाई सुधार नगर्नु हुन्छ भने तपाईं पैसा फिर्ता लिनु भएको छ र तपाईले दुई जोडा सुधार गर्नुभएन भने तपाईले त्यहि रकम पाउनुहुनेछ, यी दुई संयोजनहरू जस्तै लायक छन् जस्तो लाग्छ। र जब देखि यो सत्य हो, किन $ 250 को चार राजाहरु को कोशिश न गर्नुहोस?
तथ्य यो हो कि यी दुई संयोजनहरू केवल समान छन् यदि तपाईं तिनीहरूलाई अन्तिम फाईलको रूपमा समाप्त गर्नुहुन्छ। एक हातको रूपमा तपाईं आकर्षित गर्नुहुन्छ, तिनीहरू सबैको समान होइनन्। यदि तपाईं केवल राजाहरू बनाउनुहुन्छ भने तपाईले दुई जोडीहरू राख्नुभयो भने पूर्ण घर ($ 45 को लायक) पूरा गर्न सम्भव छ।
यसको तुलना गर्नुहोस् A ♣ A ♥7♠7♦5♠। यहाँ सही खेल इक्सेज हो, जुन औसत $ 9.65 को लायक हो। के फरक छ? तपाईसँग अझै पनि 1-in-360 शट को एसिन्स जोडी को 4-of-a-kind को रूप मा परिवर्तित गर्न को लागी तपाईं लगभग एक जोडे को परिवर्तित गर्न को लागि, तर चार एसेज ($ 800 या शायद $ 2,000 को लायक) लायक हो धेरै भन्दा धेरै राजाहरू ($ 250)।
सबै पाँच कार्डहरू होल्डिङमा एक $ 45 को लायक एक पूर्ण घर हो, तर केवल एप्स को $ 63.58 को लायक छ। जब तपाईं3को-एक प्रकारको साथ सुरू गर्नुहुन्छ र तपाईले दुईवटा कार्डहरू खिच्नुहुन्छ, सँगै तपाइँसँग क्व्याड प्राप्त गर्न 4.25% मौका छ। यो समय, यसको लागि जानुहोस्!
यसको तुलना गर्नुहोस्3♠3♥3♣6♥6♠। आफ्नो तर्फबाट टाँसिने "मात्र" $ 37.68 को लायक छ, किनभने चार थोरै लगभग चार इक्सा जतिको लायक छैन। त्यसैले यस अवस्थामा, $ 45 पूरा घर राख्नुहोस्।
एक ♣ A ♥3♥4♥5♥
डबल डबल बोनस खेलाडीहरूले चार इक्टिङ्गलाई माया गर्दछन्, तर तपाईं जोडी जोडीसँग तीनवटा इङ्गेरीहरू तीन कार्डहरू प्राप्त गर्न लामो तरिकामा हुनुहुन्छ। अयस्कको जोडीलाई यहाँ $ 9.50 को लायक छ।
एकैछिनमा एक अर्काको हातमा रमाईलो लागेकी थिईन। मैले भनेँ, "तिम्रो मनको कुरा हो कि?" यो अझ राम्रो बजेट हो।
$ 20 को लागि सबै पाँच कार्डहरू राख्ने सीधा एक प्रकारको "तपाईंको बहिनी चुम्बन" हात। यो भयानक छैन, तर पनि धेरै रोमाञ्चक छैन।
अझै, आठ छोडेर $ 250 सीधा फ्लशको लागि प्रयास गर्दै केवल $ 17.13 को लायक छ। तपाईं केवल समयको सिधा फ्लश 4.25% सँग समाप्त हुन्छ, र तपाईं समयको 57% भन्दा बढी केहि पनि समाप्त हुनुहुन्न। गधा प्रमाणित गर्न अझ राम्रो।
ध्यान दिनुहोस् यो हामीले पहिलो समस्या मार्फत फरक जवाफ हो, जहाँ हामीले कश्मीर बाट9टिम ♦ क्यू ♦ जेएन एक्सएनएक्स ♦ 10 ♠ र यो मिलाउनुपर्दछ। के फरक छ? पहिलो समस्यामा हामी एक $9शाही फ्लशको लागि जाँदैछौँ। हालको समस्यामा हामी एक $ 4,000 सीधा फ्लशको लागि जाँदैछौं। त्यसै गरी होइन!
त्यसोभए तपाईले के गर्नुभयो?
धेरै व्यक्तिलाई एहसास गर्नु भन्दा सही ढंगले बजिरहेको छ। सौभाग्य देखि त्यहाँ केहि सफ्टवेयर उत्पादनहरू छन् जुन तपाईले गल्ती गर्नुहुँदा तपाईंलाई अभ्यास गर्न र सही गर्न अनुमति दिन्छ। म विजेताहरूको लागि भिडियो पोकर प्रयोग गर्दछु, तर त्यहाँ अन्य असलहरू पनि छन्।
मैले आज केहि हातहरू मात्र देखाउँछु। त्यहाँ धेरै अन्य हातहरू छन् जहाँ खेलाडीहरूले गल्ती गर्दछन्। एक सानो अभ्यासले तपाईको परिणामहरु लाई अत्यन्तै राम्रो बनाउनेछ!
ब्वाँसो पैक में शामिल होने के लिए तैयार हो और रक्त लोकोर पिशाच क्लान में कुछ भयानक पिशाच ले लो, एक रोमांचक, ...
जब खेलाडीले 'डील' बटनमा क्लिक गर्छ भने एक हात पहिला निलम्बित हुन्छ। खेलाडीले कार्डमा क्लिक गर्न चाहन्छ कि त्यो कार्ड चाहेको छ। यदि कुनै कार्डहरू पहिले नै विजेता संयोजनहरू सिर्जना गर्दछ भने तिनीहरू सफ्टवेयरद्वारा 'हेल्ड' चिन्ह लगाइएको छ। यद्यपि खेलाडीहरूले ती कार्डहरूलाई तिनीहरूलाई क्लिक गरेर मुक्त गर्न सक्छन्। एकपटक प्लेयरले निर्णय गर्दा एकपटक 'ड्रा' बटनमा क्लिक गर्नु पर्छ। आयोजित कार्डहरू प्रत्येक 100 हातहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ। सफ्टवेयर रिक्त पदहरूमा ताजा कार्डहरू व्यवहार गर्दछ। विजेता संयोजनहरू स्क्रिनको बायाँ छेउमा ट्रयाक गरिन्छ जुन पेआउट तालिकामा निर्दिष्ट भुक्तानी द्वारा विजेता संयोजनको प्रत्येक प्रकारको सङ्ख्या बढाउँछ। प्लेयरको कुल अंकहरू 'भुक्तान' कक्षमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
पेआउट तालिका क्लिक गरेर 'भुक्तानी तालिका' बटन क्लिक गरेर पहुँच गर्न सकिन्छ। पेआउट अलग देखि 1 सम्म5सिक्कों को लागि दिखाए गए। 1 सिक्का विजेताका लागि, जैक वा राम्रो 1 सिक्का बाहिर निस्कन्छ र रयल फ्लशले 250 सिक्का बाहिर पुर्याउँछ। अन्य विजेता संयोजनका लागि पेआउटहरू बीचमा छ। विजेता अधिक सिक्कों को लागि भुगतान को सिक्कों की संख्या के अनुपात में है। त्यहाँ यो अपवाद छ।5सिक्किङका साथ रयल फ्लशका लागि पेन्डिङ 4000 को सट्टा 1250 हो।
राम्रो केटी खराब केटी मोबाइल
विशेषताहरू यदि तपाइँ राम्रो केटीको रूपमा खेल्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, विजेता संयोजनहरू बायाँ देखि दायाँबाट बनाइन्छ। यदि तिमी ...
सज्जन हट डिलक्स
सज्जन हट डिलक्स नोनोमेटिक द्वारा बनाइएको सबैभन्दा प्रतिष्ठित स्लॉट मिसिनहरु मध्ये एक हो। यो लगभग प्रत्येक मा फेला पर्यो ...
बाह्य जैकपोट पोकर धेरै हातहरूको लागि एक अनलाइन भिडियो पोकर हो, जसमा जोक बिना मानक 52 कार्ड डेक प्रयोग गरिन्छ। भर्चुअल डीलरले प्रत्येक हातको सुरुवात अघि कार्डहरू शफल गर्दछ।
खेलको उद्देश्य एक वा बढी रेखाहरूमा भुक्तान गरिएको हात सङ्कलनमा समावेश गर्दछ। यो प्राप्त गर्न, यो प्रत्येक हातमा एक पटक नि: शुल्कका लागि पाँच कार्डहरू आदान प्रदान गर्न अनुमति छ।
भिडियो पोकर डबल जैकपotमा 5, 10, 25, 50 वा 100 हातहरू प्ले गर्न सम्भव छ। यो उही रेखा प्ले गर्न अनुमति छैन।
दुई सेन्ट सम्म पाँच यूरोबाट एक देखि पाँच सिक्का शर्तहरू प्रत्येक हातको लागि स्वीकार गरिन्छ। अधिकतम शर्त प्रति हात रेखाहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ।
जैक जोडाबाट मानक पोकर हातहरू शाही फ्लशमा भुक्तान गरिएका छन् डबल जैकपोट पोकर। यसको अतिरिक्त, यस भिडियो पोकरमा क्व्याडका धेरै किसिमहरू मान्य छन्: फिइभ-राजाहरू, डेउसेस-चौड र एसेज (मूल्यहरूको बढ्दो क्रममा व्यवस्थित)। डबल जैकपोट पोकरमा चार-किसिमको इक्के दोस्रो-अर्काको हात हो।
उच्च बाधाहरू पाँचौं सिक्का (चार हजार सिक्का) दाँत गर्दा शाही मासुको लागि प्रदान गरिन्छ।
खेलको समयमा, प्रयोगकर्ताहरूले पहिलो पटक आफ्नो सुरुवात हातमा पाँच कार्डहरू हेर्छन्। उहाँले निर्णय गर्नुपर्दछ जुन कुन कार्डहरू बदलिनु पर्छ। आयोजित कार्डहरू सबै अन्य लाइनहरूमा डुप्लिकेट छन्। त्यसपछि Croupier नयाँ कार्डहरू (प्रत्येक रेखामा एक व्यक्तिगत डेक छ) सम्झौता गर्दछ। त्यस पछि, सबै हातको लागि भुक्तानी गरिन्छ।
दुग्धको लागी खेलमा कुल बजेट बढ्न सकिन्छ। जुआले चारवटा प्वाल कार्डहरू बीचको एउटा खोजी गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, जसले व्यापारीलाई कार्डलाई हराउन सक्नेछ। सफल छनौट युगल भुक्तानी। शर्त गुमाउने असफल परिणाम।
Ra क्लासिक को किताब
लोकप्रिय ™ को Ra ™ को क्लासिक संस्करण प्ले गर्नुहोस् र लुकेको खजाने पत्ता लगाउनुहोस्।9रिल्समा5जीत रेखाहरू ...
ठूलो विजय बिरालो
अनलाइन स्लट्स विकासकर्ताको नेतृत्व गर्दै, 'ना जाओ प्ले गर्नुहोस्, खेलाडीहरूलाई आफ्ना औंलाहरूमा राख्नुहोस्। एक हप्ता तिनीहरूले चालक जारी गर्दै छन् ...
बोनस Deuces जंगली केहि पोकर हातका लागि विशेष बोनस ख्यातपट्टिहरू र सबै चार Deuces जंगली संग एक अनलाइन भिडियो पोकर खेल हो। यी विशेष सुविधाहरू केही जंगली अनलाइन भिडियो पोकर प्लेको लागि बोनस डेउज वाइल्डको साथ बनाइन्छ।
बोनस Deuces जंगली संग अनलाइन भिडियो पोकर जैकपोट
यो केहि अपवादहरूको साथ पारंपरिक पोकर गेम जस्तै खेल्दछ। पहिलो, सबै चार deuces जंगली छन् र एक विजेता पोकर हात सिर्जना गर्न कुनै अन्य कार्ड को लागि स्थानान्तरण गर्न सक्छन्। दोस्रो, यो सँग केहि पोकर हात संयोजनका लागि विशेष बोनस पेआउटहरू छन्। यी संयोजनहरुमा एसी, चार द द द (द्यूज), पांच को एक प्रकार (एन्स), र अन्य पाँच-एक-प्रकार को संयोजन संग चार डीवियस शामिल छ। याद राख्नुहोस्, जंगली कार्डहरूले यो अनलाइन भिडियो पोकर खेलमा पाँच प्रकारको प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँछ।
भिडियो पोकर अनलाइनको धेरै भिन्नताहरूको रूपमा, तिनीहरू सबै भन्दा ठूलो भुक्तानी एक प्राकृतिक रयल फ्लशको लागि हो। Bet5सिक्का र एउटै सूटको एसी-राजा-रानी-जैक-10 पाउनुहोस्, र तपाइँले 5,000-सिक्का ख्यातपट्टि लिनुहुन्छ।
तपाईंलाई बोनस Deuces जंगली भिडियो पोकर अनलाइनमा जित्ने कम्तिमा तीन प्रकारको आवश्यक पर्दछ। यसले सान्दर्भिक आवाश्यक हुन सक्छ, तर सम्झनुहोस्, चार जंगली कार्डहरूले यसलाई सजिलो बनाउँछ।
कसरी बोनस डीयूस जंगली भिडियो पोकर अनलाइन प्ले गर्न
तपाईंले पहिला आफ्नो शर्त राख्न आवश्यक छ। एकपटक तपाईंले गर्नुभयो भने, तपाईंले पाँच कार्ड पाउनुहुनेछ। तपाईँले निर्णय गर्ने कुन कार्डहरू राख्नुहुन्छ र तपाइँ ड्राउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाइँ विजेता संयोजन प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, यो प्रतियोगिता पेआउट तालिकामा हाइलाइट गरिएको छ। तपाईसँग दुई विकल्प हुनेछ। तपाईं आफ्नो winnings एकत्र गर्न र नयाँ खेल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ; वा, तपाईं दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। डबलिंगले डिलरको हातको विरुद्धमा तपाईंको जीतलाई जित्नको लागि मौका पाउनेछ। तपाईं डीलर कार्ड भन्दा उच्च कार्ड प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ। यदि तपाइँ त्यसो गर्नुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो विन्नी डबल गर्नुहुनेछ, यदि होइन भने, तपाईंले तिनीहरूलाई हराउनुहुन्छ।
बोनस Deuces जंगली अनलाइन भिडियो पोकर संग मजा
बोनस डेउज वाइल्डको साथ आज धेरै मजा लिनुहोस्। तपाइँलाई अनलाइन भिडियो पोकरको परम्परागत मजा पेश गर्दा, यो खेल जंगलमा ड्युज बनाएर एक रोमाञ्चक मोडिन्छ। तपाईंलाई कहिल्यै थाहा छैन कि कसरी बोनस Deuces जंगली भिडियो पोकर अनलाइन संग समाप्त हुनेछ!
बोनस पोकर को एक भिन्नता हो जैक वा राम्रो भिडियो पोकर जसले एक प्रकारको4को लागि बोनस पेआउट प्रदान गर्दछ। प्रकारको4को लागि बोनस को राशि आधारित छ जसमा कार्डहरू जुन हातमा छन्। यो धेरै क्यासिनोहरूमा खेल्नको लागि सबैभन्दा राम्रो भिडियो पोकर खेल हो।
यस पृष्ठमा, हामीले बोनस पोकरलाई एकदम विस्तृत विवरणमा राख्दछौं। हामी कसरी व्याख्या गर्न को लागी, पेन तालिकाहरूमा एक नजर राख्नुहोस्, र बाधा र फिर्ताब्याक प्रतिशतमा विवरणहरू प्रदान गर्नुहोस्। तपाइँलाई राम्रो तरिकाले खेल खेल्न मद्दत गर्न त्यहाँ केहि रणनीति सल्लाह छ।
बोनस पोकरले यसको आफ्नै संस्करणहरू पनि स्पेस गरेको छ, र हामी पनि कवर गर्छौं बोनस पोकर डिलक्स यसको आफ्नै भागमा।
बोनस पोकर कसरी गर्ने?
बोनस पोकर जैक वा राम्रो भिडियो पोकरमा आधारित छ, त्यसैले गेमप्ले समान छ। तपाईं बोनस पोकर मिसिनमा पैसा सम्मिलित गरेर सुरू गर्नुहोस्, र तपाईले क्रेडिट कार्डको सङ्ख्या प्रदर्शन गर्न स्क्रिन अपडेटहरू। त्यसपछि तपाइँ निर्णय गर्नुहुन्छ कि तपाई कुन सिक्काहरू सिक्नु चाहनुहुन्छ-1 लाई5बाट।
तपाई सधैँ अधिकतम शर्त (5 सिक्का) सँग जानुहुन्छ। कुनै पनि भिडियो पोकर खेलमा शीर्ष हातको लागि सबैभन्दा राम्रो पेआउट मात्र अधिकतम शर्त भुक्तानी गर्दछ। कम भुक्तानीले तपाईंको विजेतालाई विजेता टाँस्नका लागि तपाईंलाई फरक हानि दिन्छ। हामी तिर्नु पर्ने छ कि तिर्नु पर्ने वेतन तालिका मा खण्डमा।
कम्प्युटरले तपाइँलाई5कार्डहरूको आभासी हातलाई सम्झौता गर्दछ। भिडियो पोकर ड्रक पोकरमा आधारित छ, त्यसैले तपाईलाई बीचमा छोड्न अनुमति छ0र5कार्डहरू। कम्प्युटरले तपाईंले खारेज गर्ने प्रतिस्थापन गर्न नयाँ कार्डलाई सम्झौता गर्दछ। तपाईंको अन्तिम हातको पोकर रेटको आधारमा, तपाईँले एउटा पेआउट पाउनुहुन्छ, खेलको लागि पेर्म तालिकामा आधारित।
ज्याक वा राम्रो भिडियो पोकरमा, कम से कम भुक्तानी हात जैक वा बेटरको एक जोडा हो, र उच्चतम भुक्तानी हात एउटा रयल फ्लश हो। बोनस पोकरले दयालु हातको4को लागि बोनस पेआउट प्रदान गर्दछ, कुन कार्डमा त्यस हातको भागको रूपमा कुन श्रेणीमा आधारित हुन्छन्।
एक विशेष हात प्राप्त गर्नुका कारणले कार्डको डेकमा मानक 52 कार्डको आधारमा आधारित छन्, तपाइँ जित्नका लागि आफ्नो बाधालाई अधिकतम गर्न उपयुक्त रणनीतिको गणना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं खेलको लागि फिर्ताब्याक प्रतिशत निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ, जो स्लॉट मिसिनहरूसँग सम्भव छ जुन केहि छ।
कारण स्पष्ट हुनुपर्छ, तर यदि यो होइन भने - तपाईं 52 कार्ड डेक बाहिर एक विशेष कार्ड प्राप्त गर्ने बाधाहरू थाहा छ। त्यहाँ प्रत्येक पङ्क्तिको4कार्डहरू मात्र छन्, र प्रत्येक सूटको मात्र 13 कार्डहरू छन्।
तर एक स्लॉट मिसिनको साथ, तपाईंसँग कुनै विशेष प्रतीक अपील को बाधाहरू के हो भन्ने कुराको कुनै पनि तरिका छैन। यद्यपि तपाइँ एक विशेष संयोजन को लागी भुक्तानी के हो भने, तपाईलाई थाहा छैन कि यो संयोजन को मारने को बाधाहरु के हो।
बोनस पोकर वेतन तालिकाहरू
हामी पहिले नै यो उल्लेख गरौं, तर बोनस पोकर को मुख्य पहलू जसले यसलाई एक सादा पुरानो जैक वा राम्रो खेलबाट अलग गर्छ, त्यस प्रकारको4को लागि बोनस पेआउट हो। टेबल टेबल मेशिन देखि मेशिन भिन्न हुन्छ, यद्यपि, र केहि वेतन तालिकाहरूले खेलाडीलाई राम्रो बाधा प्रदान गर्दछ। यहाँ प्रत्येकको लागि विभिन्न हात र साधारण भुक्तानीको लागि एक गाइड हो।
यो परम्परागत रूपमा कुनै पनि भिडियो पोकर खेलमा उच्च भुक्तान गर्ने हात हो। यसले 800 मा 1 मा बन्द गर्दछ, तर यदि तपाईँले5सिक्काहरूको अधिकतम शर्त राख्नुभयो भने मात्र। यसको मतलब तपाईंले एक 4000 सिक्का ख्याप्प देख्नुभयो भने तपाईले यो हिट गर्नुभयो। तपाईले कुनै पनि भिडियो पोकर खेलमा अधिकतम सिक्का भन्दा कमको लागि खेल्न नसक्नुको कारणले सानो शर्तको सन्दर्भमा रोयल फ्लशको लागि कम भुक्तानीको कारण।
यो हात 50 बाट 1 मा भुक्तान गर्दछ। एक विषमलिंगीय फ्लश को लागि पेआउट, र सबै निम्न तल वाला हातहरु को लागी, निरंतर बनी रहयो कि चाहे तपाईं अधिकतम सिक्का शर्त लगाए हो या नहीं। एकमात्र अन्तिम हात जहाँ त्यो कुरा हो कि रयल फ्लश हो।
एक प्रकार को4- एसेस
यो ठूलो बोनस हात हो। यसले 80 बाट 1 मा बन्द गर्दछ। यो बोनस पोकरमा दर्ताको उच्चतम भुक्तानी4हो।
Kind of4- 2s, 3s, or 4s
यी सबै हातहरू 40 मा 1 मा बाहिर निस्कन्छन्।
दैलोको कुनै पनि अन्य 4
यी हातहरू 25 मा 1 मा बाहिर निस्कन्छ।
यो हात 8 बाट 1 मा भुक्तानी गर्दछ। यो एक महत्त्वपूर्ण हात हो, किनकि जैक वा बेल्ट गेमहरूमा, पूर्ण हाउस र फ्लशका लागि पेआउटको साइज वेआउटहरू हुन् जुन खेलबाट परिवर्तन गर्न क्यासिनो उच्च वा निचो किनारा दिनको लागि खेलमा परिवर्तन गर्दछ। बोनस पोकरको उत्कृष्ट संस्करणहरूमा यी 8 हातहरूमा5/2भुक्तानी छ, जसको अर्थले पूरा घर 8 बाट 1 मा भुक्तानी गर्दछ, र फ्लशले5बाट 1 मा भुक्तानी गर्दछ।
5 बाट 1 मा बन्द गर्दछ। हामी पूर्ण थियो माथि पूर्ण भाग मा पूर्ण हाउस / फ्लश रिश्ते को बारे मा भन्न को लागि।
4 बाट 1 मा बन्द गर्दछ।
एक प्रकार को 3
3 बाट 1 मा बन्द गर्दछ।
2 बाट 1 मा बन्द गर्दछ।
ज्याक वा राम्रो को जोडी
यसले पनि बाधाहरूमा बन्द गर्दछ।
एक वास्तविक 8 /5बोनस पोकर भुक्तान तालिका निम्नानुसार छ। 1-4 सिक्किन्सका लागि भुक्तानीमा फरक फरक फरक पार्नुहोस् रयल फ्लशका लागि5सिक्काहरूको लागि भुक्तानी बनाउनुहोस्।
बोनस पोकर भिडियो पोकरको लागि एक वेतन तालिका
यो स्पष्ट हुनु पर्छ कि तपाइँ हरेक खेल खेल्ने निश्चित सिक्नु हुन्छ भनेर तपाईं किन सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ? रोयल फ्लशको लागि पेआउट केवल 250 सम्म 1 सम्म नभएसम्म तपाइँ अधिकतम ब्याट्टि गर्नुहुन्छ, कुन सन्दर्भमा 800 1 लाई।
सबै बोनस पोकर खेलहरू समान बनाइएका छैनन्। क्यासिनो र निर्माताहरूले विभिन्न हातको लागि पेआउट समायोजन गर्न सक्छन्। ज्याक वा बेटरको रूपमा जस्तै, विविधताका अधिकांशहरू पूर्ण हाउस र फ्लश संयोजनसँग हुन्छन्। यहाँ उत्तम संयोजन 8 /5हो, तर तपाईँले7/5र6/5भुक्तानीहरूसँग खेलहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
बोनस पोकरले पनि दयालु हातहरूको4को लागि बोनसको आकारमा भिन्नता देख्छ। केही बोनस पोकर खेलहरूले 35 लाई 1 वा 30 लाई 1 लाई कुनै पनि प्रकारको4मा तिर्नुहोस्, चाहे बिना श्रेणीको। यसले तपाईंको पेयब्याक प्रतिशतमा एउटा अचम्मको प्रभाव छ, जुन हामी तल छलफल गर्नेछौं।
तपाईं पनि (शायद नै) एक बोनस पोकर गेम फेला पार्नुहुनेछ जुन पूर्ण हाउस र फ्लाशको लागि फ्ल्यास जस्तै 10 / 8 को प्रस्तावित भुक्तानी प्रदान गर्दछ। उनीहरूले निम्न प्रकारका हातहरूमा पेआउट कम गरेर यसका लागि तिर्छन्, जस्तै कि एक प्रकारको2पुर्ज र3जस्ता।
हीराको संसार तपाईंको हातमा छ! हीरेको फॉर्च्यूनले तपाईंलाई चमकदारमा बाटोमा सेट गर्नेछ ...
प्राचीन मिस्रमा धेरै स्लॉटहरू छन्, र एकदम कम छ जुन लिप्रेन्सन पनि समावेश गर्दछ - यद्यपी संयोजन ...
हामीले पहिले हाम्रो सिंहावलोकन लेखमा भनेका छौं, बोनस पोकर डिलक्स एक खेल हो, जो 52 कार्ड को डेक को उपयोग गर्दछ र एक विजेता हात को लागि सबै भन्दा कम श्रेणी को रूप मा जैक को जोडी छ। बोनस पोकर डिलक्स, बेक्स बेटरको बिरुद्ध, प्रायः दुई जोडाको रूपमा एक खेलाडीले हातको लागि पनि पैसा दिन्छ। जस्तै जैक वा राम्रो, सबै चार-एक-प्रकार संयोजन एक र बाहिर सिक्का को एक नै संख्या बाहिर। तथापि, बोनस पोकर डिलक्स खेल्दा, यदि कसैले चार प्रकारको राख्छ भने, उसले 80 लाई पैसाको रकम तिर्न सक्दछ।
लायक उल्लेखनीय छ कि यस खेलको विभिन्न प्रकारहरू अवस्थित छन् र तिनीहरूमध्ये केही सिधा संयोजनहरूको लागि विभिन्न सिमेन्टहरू जस्तै सीधा फ्लश जस्ता भुक्तानी गर्छन्।
खेलको संस्करण, सबैभन्दा ठूलो कमाई गर्ने अवसर प्रदान गर्दै,9/6बोनस पोकर डिलक्स, जुन 99.64% को अपेक्षित फिर्ती प्रदान गर्दछ। यो खेल संस्करण खेल्दा, कसैले प्रत्येक सिक्काको लागि9सिक्का कमाउँदछ भने, उसले / यदि पूर्ण हाउस राख्दछ, र हरेक सिक्काको लागि6सिक्काहरू शर्त दाँत राख्नुहुन्छ, यदि उसले फ्लश राख्छ भने।
अब, हामी खेलको दुई उत्कृष्ट विविधताहरूको लागि वेतन तालिकाहरूमा हेरौं।
1x2gaming बाट वर्चुअल रग्बी गेम एक रग्बी वर्ल्ड कप सिमुलेशन खेल हो। खेलले 47 मेलहरू प्रदान गर्दछ जुन यसमा समावेश छ ...
ओली बिजनेस एक 5-reel भिडियो स्लॉट खेल हो। तपाईं5रेखाहरू सम्म सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ र5सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ ...
यदि तपाईं पोकर र स्लट खेल मनपराउनुहुन्छ तपाईं प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ Deuces जंगली, सबैभन्दा लोकप्रिय स्लॉट मध्ये एक!
Deuces वन्य भिडियो पोकर स्लॉट मिसिनहरूमा भिडियो ढाँचामा खेल्ने सबै समय मनपर्ने कार्ड खेल हो।
Deuces जंगली, Deuces जंगली नियमहरु, र जंगली खेल रणनीति रणनीति को बारे मा जानने को लागि यो लेख पढ्नुहोस्।
ड्युस वाइल्ड भिडियो पोकर कसरी प्ले गर्ने
Deuces वाइल्ड सबै पोकर खेलहरू जस्तै सुरू हुन्छ जस्तै तपाईले शुरुवात शर्त राख्नु पर्छ। प्राय: भिडियो पोकर खेलहरू सामान्य बेल्ट सीमा साझेदारी गर्दछ, जुन सामान्यतया न्यूनतम 25c हो र प्रतिमा $ 10 को अधिकतम शर्त हुन्छ। प्लेयरसँग प्रति शर्तको गुणस्तरको पाँच सिक्का प्रयोग गर्ने विकल्प पनि छ।
एकपटक पहिलो पटक राखिएको बेला, खेलाडीलाई पाँचवटा कार्डहरू दिइएका छन् जुन अनुहारमा छन्। कम्प्युटरले स्वचालित रूपमा सबै विजयी हातहरू समात्नेछ। यो खेलाडीहरू आफ्नै हातको निर्माण गर्न एकमात्र जिम्मेवारी हो। खेलाडीले सधैं डाइज (twos) राख्दछ जुन यी जंगली कार्ड हुन्। पाँच प्रारम्भिक कार्डबाट, खेलाडीले कार्डहरू राख्न चाहानु भएको कार्ड चयन गर्दछ र अवांछित कार्डहरू खारेज गर्दछ। प्लेयर डिवार्ड भएपछि, कम्प्युटरले नयाँ कार्डहरू व्यवहार गर्नेछ जसले खेलाडीको अवांछित कार्डहरू प्रतिस्थापन गर्नेछ। सबै कार्डहरू दोस्रो पटक निलम्बित भएपछि सबै भन्दा राम्रो सम्भव हात चयन गरिन्छ र खेलाडी तदनुसार भुक्तानी गरिन्छ।
हरेक जितको साथ, खेलाडीहरूले बोनस राउन्ड प्राप्त गरे उनीहरूलाई उनीहरूको पैसा दोहोर्याउने मौका दिए। बोनसमा खेलाडीले पाँचवटा कार्ड, चार अनुहार र एक सामना गर्दछन्। कार्डहरू सामना गर्नाले, खेलाडीलाई कार्ड चयन गर्नु पर्छ जुन अनुहारको कार्ड भन्दा उच्च छ। कार्यक्रममा छानिएको कार्ड अनुहार कार्ड भन्दा उच्च छ भन्ने घटनामा, खेलाडीसँग पैसा दुरी गर्न अर्को मौका छ। यदि उच्च कार्ड छान्नु भएकोमा खेलाडी असफल छ, शर्त हो हराएको र बोनस राउन्ड अन्त हुनेछ। बोनस खेलको अन्त्यमा, डेयस वाइल्ड गेम पुनः सुरु हुनेछ।
Deuces जंगली रणनीति
खेलको नाम यो सबै भन्छ, ड्यूज हङकङ हो। त्यसैले तपाईले सधैं आफ्नो डीजल को शुरुवात सम्झौतामा राख्नुपर्छ।
तल वैकल्पिक हात बिल्डर्सहरूको सूची हो।
यदि तपाइँले निम्नलाई प्राप्त गर्नुभएको छ भने रद्द गर्न कुनै आवश्यक छैन; एक शाही फ्लश, एक सीधा फ्लश, एक प्रकार को चार, वा पूर्ण घर।
यदि तपाईं पाँचवटा पाँच कार्डहरूसँग सम्भव सम्भव छ भने अवांछित कार्ड खारेज गर्नुहोस् र सिधा वा शाही फ्लश प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग तीन कार्डहरूसँग सम्भव सम्भव छ भने, दुई अवांछित कार्डहरू खारेज गर्नुहोस् र दुई नयाँ प्राप्त गर्नुहोस्।
यदि तपाई दुई जोडी जोडी हुनुहुन्छ भने, उच्च जोडामा निर्माण गर्न सानो जोडा छोड्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग सम्भव सीधा वा फ्लश छ भने, अनचाहे कार्ड खारेज गर्नुहोस् र तपाईंको सिधा वा फ्लशमा निर्माण गर्नुहोस्।
यदि तपाईं एक रानी राजा, रानी-जैक वा उही रङको जैक-दस निलम्बित गर्नुभयो भने यी राख्नुहोस् र अवांछित कार्डहरू त्याग्नुहोस् र तपाईंको शाही फ्लशमा निर्माण गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग चार कार्डहरूसँग सम्भव छानबिनको शाही फ्लश छ भने, अवांछित कार्ड खारेज गर्नुहोस् र ड्यूस शाही फ्लशमा निर्माण गर्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग निर्माण गर्न सम्भव सिधा छ भने, प्रयोग गर्नको लागि चार प्रयोग योग्य कार्डहरू राख्नुहोस्, अवांछित कार्ड छोड्नुहोस् र डाइअस सिधा जानुहोस्।
यदि तपाइँसँग तीन डेन र दुई अजीब कार्ड छ भने, अजीब कार्डहरू बेवास्ता गर्नुहोस् (बेजोड) र दुई नयाँ तान्नुहोस् र तपाईंको डाइजेसनमा बनाउनुहोस्।
यदि तपाइँ एक ड्यूस र हात मानको चारवटा कार्डहरू निलम्बित गर्दै हुनुहुन्छ भने, डिस राख्नुहोस् र चार नयाँ कार्डहरू राख्नुहोस्, चार कार्डहरू खारेज गर्नुहोस्।
Deuces जंगली खेल्दा यो रणनीति प्रयोग गरेर, खेलाडीले राम्रो काम गरेका छन् र खेलमा आफ्नै स्पिन सिर्जना गर्न यी रणनीतिहरू निर्माण गरे।
???? 30 नि: शुल्क स्पिन कुनै जम्मा छै�